जाडोको मौसम को पौष्टीक हरियो घाँस पशुको लागी वरसिम डा. केदार कार्की – www.agnijwala.com
बरसीमको खेली जाडोको मौसममा पशुको दुध उत्पादनको लागी अत्यन्तै लाभकारी मानिन्छ । बरसीम को बानस्पतीक नाम एलेवजान्ड्रीयम हो । बरसीममा दुध उत्पादनको लागी प्रचुर मात्रामा कयालसियम फोस्फोरस पाइन्छ साथै यसमा प्रचुर मात्रामा कैरोटिन पनि पाइन्छ । जस्ले गर्दा दुध उत्पालनमा धेरै बृद्धि हुन्छ ।
जमीनको छनौट ः
बरसीमको खेतीको लागी मुख्य रुपमा भारी दोमट माटो भएको जमीन राम्रो मानिन्छ तर पनि यो सवै खाले माटोमा लगाउन सकिन्छ जस्मा पानी को उचीत भएको हुनु पर्दछ ।
बरसीमको उन्नत प्रजती एव तीनको छनौट ः
बरसीमको प्रजातीलार्य यस्को क्रोमजोम संख्याको आधारमा दुई प्रकारले बिभाजन गर्न सकिन्छ
डिप्लाइड को प्रमुख प्रजातीहरु ः
यसमा मुख्यरुपमा मिस्कानी र बरसीम लुधियाना – १ मानिन्छ । मिस्कावी ः यसको प्रति हेकटर उत्पादन ८००– ९०० किवटल सम्म हुन्छ । यो नरम डाठ भएको हुन्छ यस्को घास नवेम्वरको आधा आधि देखि डिसेम्वर अतींम सप्ताह सम्म काटन सकिन्छ बरसीम लुधियाना –१ बरसीमको यस प्रजातीबाट मिस्कावी भन्दा २५–३० प्रतिशत बढी उत्पादन प्राप्ती हुन्छ । यसलाई बढी सिचाइको आवश्यकता पर्दछ यो प्रजातीको उत्पादन ११०० – १२०० किवटल प्रति हेकटर हुन्छ यसबाट मइमहिना सम्म घाँस उत्पादन लीन सकिन्छ ।
टेट्राप्लाइड का प्रजातीहरु ः
पुसा जाईट वरदान मुख्य मानीन्छ । वरदान ः यस प्रजातीवाट ४ देखी ५ पटक काटेर घाँस प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो १५० देखि १६० दिनमा पाकदछ ।
वरसीम खेती गर्ने जमीनको तयारी ः
यस घासको फसललाई बर्षे वाली पछि लगाउने गरिन्छ । यसैले खेतको तयारीको लागी सवभन्दा पहिले खेतको माटोलाई माटो पल्टाउने हलो ले जोत्नु पर्छ त्यस पछि हैरो लगाएर खेतलार्य सम्म गरीनु पर्छ । त्यसपछि खेतको माटोलायृ राम्रो सँग मसीनो पार्नु पर्दछ । जस्ले गर्दा उत्पादन राम्रो होस किनभने वरसीमको वीउका दाना साह्ै मसीना हुन्छन् यसरी तयार पारीएको खेतलाई स–साना कयारीमा बाडनु पर्छ जस्ले गर्दा खेतको सिचाइ राम्रो सीत गर्न सकियोस ।
बीउ छर्ने समय ः
धेरै उत्पादन लीनका लागी वरसीमलाई अकटोवर पहिलो हप्तामा छर्नु उचित हुन्छ धेरै चाँडो धेरै ढिलो गरी बीउ छर्दा यसले उत्पादलनमा नराम्रो असर गर्दछ ।
बीउको मात्रा ः
बेलैमा बिउ छर्ने हो भने प्रति हेकटर २५ देखि ३० ग्राम बीउ आवश्यक पर्छ । चाडै वा ढिलो गरी विउ छर्ने हो भने ३० – ३५ ग्राम प्रति हेकटरका दरले विउ आवश्यक पर्छ ।
छर्नु भन्दा पहिले बीउको उपचार ः
बरसीम खेती गर्नको लागी बीउ उपचार गर्दा सवभन्दा पहिले बीउलाई पानीमा भिजाएर त्यसमा मिसिएको कम्पनीको बीउ तथा अन्य झारपात छुट्याउनु पर्छ । बरसीमको बीऊलाई ५ प्रतिशत नुनको झोलमा भिजाउदा बरसीमको दाना पानी मुनी थिग्रीएर बस्दछ अरु बाकी झारपात तथा अन्य अनावश्यक बीउ मिसिएको भए पानी माथी तैरीन्छन् । यीनलाई छानेर निकाल्नु पर्दछ । त्यस पछि बरसीमको बिउलाई दुइ तीन पटक पानीले धोएर छायादार ठाउमा सुकाउनु पर्छ । त्यस पछि बरसीम छर्नु भन्दा पहिले राइजोवियम ट्राइफोलीआइ नामक जीबाणुवाट बीउको उपचार गर्नु अति आवश्यका हुन्छ । यसको लागी २५० ग्राम सख्खरको १० प्रतिसत झोल बनाएर चिसोपार्नु पर्छ । त्यस पछि राइजोवियम कल्चर मिसाएर सुकाएको बरसीमको बिउमा मिलाउनु पर्छ र केहि बेर छायामा राखी यसरी उपचारीत बीउ तयार पारीएको खुतको कयारीमा छर्ने गरिन्छ ।
बरसिमको बीउ छर्ने बेलामा राम्रो सीत तयार गरिएको खेतमा ५– ६ से.मि पानी हुनु अत्यन्त आबश्यक हुन्छ । जसले गर्दा बिउलाइ चरा चुरुङ्गी बाट बचाउन सकिन्छ र बीउ पानीमा थिग्रने हुँदा बिउमाथि माटोको एक तह बस्ने गर्दछ । जस्ले गर्दा प्रयाप्त चिस्याउलोपन रहि रहन्छ । जस्ले बरसिमको बिउ उर्मान राम्रो मद्धत गर्दछ ।
बरसीमको लागी मलखादको ब्यबस्थापन ः
बरसीम एउटा दलहन जन्य घाँसको बाली भएकोले यसमा वायुमण्डल बाट नइट्रोजन ग्रहण गर्ने क्षमता राख्दछ । जस्को कारण यो बाली लाई २० – ३० के.जी नइट्रोजन १०–१५ टन गोबर मल तथा ५०–६० के. जी फोस्फरस प्रति हेक्टर आवश्यक पर्छ।
घाँस काटने बेला ः
बरसिम छिटो बढने हुँदा पहीलो बाली ३० दिनमा काटनाले यो बिरुवा अझ राम्रो संग फस्टाउँ छ । प्रत्येक पटक घाँस काटि सकेपछि लगभग २० के जी खेतमा हाल्नु अनिबार्य हुन्छ । घाँस काटदा सतहबाट ५ देखि ९ से.मी अग्लो ठाउँ बाठ काटनु उचित हुन्छ ।
सिंचाइको आवश्यकता ः
साधारणतया बरसिमलाई करिवन १२ देखि १८ पटक सिचाईको आवश्यकता पर्दछ । बरसिम राम्रो सित उम्रीनको लागि लगभग ७ देखि १० दिनको फरकमा अलि अलि हलुका सिचाई गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसपछि १० देखि १५ दिनको फरकमा सिचाई गर्नु पर्दछ । मार्च अप्रिल महीनामा १० देखि १५ दिनको फरकमा सिचाई गर्नु पर्दछ । जलमग्नता बरसिमको लागी हानिकारक हुने गर्दछ । अतः पानीको उचित निकास राम्रो घास उत्पादनको लागि अनिवार्य हुने गर्दछ ।